Rent2Own Data Policy – Rent2Own
၀ယ်သူ၏နစ်နာချက်များအတွက် လုပ်ဆောင်ရန် စည်းမျဉ်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် တိုင်ကြားမှုများနှင့်အငြင်းပွားမှုများကို သင်ကြား လေ့ကျင့် ပေး ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း ကိုင်တွယ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်ကြားချက်များကို လက်ခံရရှိ ပြီးလျှင် ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်အတွင်း ဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ကြိုးစားပေးပါမည်။ အကယ်၍ ၇ ရက်အ တွင်း၀ယ်သူ၏စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အ၀ရရှိအောင်မဖြေရှင်းနိုင်ပါကအတွင်းရေးအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်(Internal dispute resolution Process)အတိုင်း ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်သ ည်။
တိုင်ကြားချက်များကို IDR Process ဖြင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း
ဆည်းပြီး တိကျမှန်ကန်စွာ ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်ဆိုင်သောတိုင်ကြားချက်ဖြစ်လျှင်တိုင်ကြားချက်များကိုအသိအမှတ်ပြု ပြီး၀ယ်သူထံ(၇ရက်)အတွင်းမည်သို့ကိုယ်တွယ်ရန်စာထုတ်ပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်သည် ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း နောက်ဆုံးထားပြီးဖြေရှင်းနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍တိုင်ကြားချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောသတိပေးမှုများ(သို့မဟုတ်)ဉပဒေအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်တောင်းဆိုထားသောရွှေ့ဆိုင်းမှုများကို၀ယ်သူအား(၇ရက်)အတွင်း ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
IDR လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တိုင်ကြားမှုများကို ကြိုးစားပြီးဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ကမ်းလှမ်းမှုများ ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို၀ယ်သူလက်ခံပါက(သို့မဟုတ်)ဖြေရှင်းမှု များကိုလက်ခံပါက အကောင်အထည်ဖော်ပြီး တိုင်ကြားမှုများကိုပိတ်သိမ်းပါမည်။
အထက်ဖော်ပြပါတိုင်ကြားချက်များကိုသက်ဆိုင်ရာအချိန်အတွင်းမဖြေရှင်းနိုင်ပါကဖြေရှင်းမှုများကို နောက်ဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အောက်ပါအချက်များဖြင့် ကမ်းလှမ်းပါမည်။
IDRလုပ်ငန်းစဉ်တွင်တိုင်ကြားမှုများ၏နောက်ဆုံးဖြေရှင်းမှုကိုရရှိနိုင်ရန်ထပ်မံညှိနှိုင်းမှုများ ဖြင့် ကမ်းလှမ်းခြင်း။
၀ယ်သူတို့၏တိုင်ကြားချက်များကိုပြင်ပအငြင်းပွားဖြေရှင်းမှု (External Dispute Resolution)လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည့်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်နှ င့်
၀ယ်သူများက နောက်ဆုံးဖြေရှင်းမှုရလဒ်ကို မကျေနပ်လျှင် EDR လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း အသေး စိတ်ထပ်မံဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါက ပြုလုပ်ရမည်။
သက်ဆိုင်ရာအချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်း၀ယ်သူအားနောက်ဆုံးမဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါကအောက်ပါ အချက်များကို သတင်းပေးရပါမည်။
တိုင်ကြားချက်များကို EDR သို့ပို့ရန် အခွင့်အရေးရှိကြောင်းရှင်းပြခြင်း
၀ယ်သူများက နောက်ဆုံးဖြေရှင်းမှုများကို စိတ်ကျေနပ်မှုမရရှိလျှင် ပြင်ပအငြင်းပွား ဖြေရှင်း မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖြင့် ဆက်သွယ်လုပ် ဆောင်ရမည်။
၀ယ်သူ၏နစ်နာမှုများဆိုင်ရာ ဉပဒေနှင့်ပက်သက်၍ နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါက ဖုန်းခေါ်ခြင်း ((+95)9669919993) အီးမေးလ်ပို့ခြင်း(info@rent2own.com.mm)ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မူဝါဒ ဖော်ပြချက်
ဤမူဝါဒဖော်ပြချက်သည် လူကြီးမင်းမှ ပေးအပ်ထားသော ကိုယ်ရေးအချက်လက်များနှင့်အတူ Rent2Own (Myanmar) Co. ltd. နှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်သူမျာ ( မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ) နှင့် သဘောတူညီချု ပ်ဆိုထားသော အကြောင်းအရာများအားလုံး အကျုံးဝင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းမှသဘောတူညီသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့မှ [တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ (သို့) စုပေါင်း၍ဖြစ်စေ] ဤမူဝါဒဖော်ပြချက်နှင့်အညီ အလျဉ်း သင့်သလို ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သဘောတူ ပါ သည်။
ဤမူဝါဒဖော်ပြချက်အား အသိမှတ်ပြုသဘောတူညီခြင်းသည် လူကြီးမင်းမှ သဘောတူညီထားသော အခြား သဘောတူညီချ က်များနည်းတူ [တစ်ခုခြင်း ဖြစ်စေ(သို့)စုပေါင်း၍ဖြစ်စေ] သီးခြား သဘောတူချက်တခုအဖြစ် မှတ်ယူမည် ဖြစ်သည်။
လူကြီးမင်းထံမှရယူထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အချက်အလက်မျ ားနှင့် ဘဏ္ဍရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်လမ်းများအား လုံခြုံစွာ ကာကွယ်သွား မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မှ ဝန်ခံကတိပြုပါသည်။
ထို့အတူ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်လ က်များအား ပြဌာန်းထားသောတရားဥပဒေနှင့်များအညီ [ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ နိုင်ငံသား များ၏ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှု ကို ကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံငွေကြေးအ ဖွဲ့အစည်းများဥပဒေ ၂၀၁၇ခုနှစ် အစရှိသည့် လိုက်နာရန်စည်းမျဉ်း ဥပ‌‌ဒေများအရ] သို့မဟုတ် ရယူရန်လိုအပ်သည် အကြောင်းအရာ များအတွက်သာ ကောက်ယူခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊ အသုံး ပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သဘောတူ လက်ခံ ထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ဆိုသည်မှာ ခွဲခြားသတ်မှတ်၍ရသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်း စီ၏ သတင်းအချက်အလက် သို့မဟုတ် ထင်မြင်ယူဆချက်များကို ဆိုလိုပါသည်။ ထိုသတင်းအချက်လ က်များသည် လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရာအချက်အလက်များနှင့် သို့ ထင်မြင်ယူဆချက်တို့ပါဝင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့မှ ထိန်းသိမ်းထားရှိထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်အ လက်နှင့်ဘဏ္ဏာရေးဆိုင်ရာအချက်လက်များသည် အောက်တွ င်ဖော်ပြထား သည့် ချေးငွေဆိုင်ရာသတင်း အချက်လက်များ ပါဝ င်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာအချက်လက်များ ၊ ချေးငွေအ မျိုးအစား၊ ချေးယူကာလနှင့် ခွင့်ပြုပေးသော ချေးငွေပ မာဏ ၊ ချေးငွေ ထုတ်ပေးချိန်၊ ချေးငွေပြန်လည်ပေး ဆပ်ချိန် နှင့် ပေးဆပ်မှုမှတ်တမ်းများ (ချေးငွေအချိန်မှန် ပြန်လည်ပေးဆပ်မှုမှတ်တမ်း)၊ ချေးငွေ ပေးဆပ်ရန်ပျ က်ကွက်မှု (နောက်ကျပေးဆပ်မှု)၊ ချေးငွေပြန်လည်ပေး ဆပ်မှု အချက်အလက်များ၊ ပေးဆပ်ရန်နည်းလမ်းအ သစ်များ၊ ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ပျက်ကွက်မှုများ၊ တရားစွဲခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အကြွေးမဆပ်နိုင်မှု အခြေအ နေများ၊ လူသိရှင်ကြား ကောက်ယူ၍ရနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ အစရှိသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။
ချေးငွေအစီရင်ခံခြင်းအဖွဲ့မှ ပေးအပ်လာသော ချေးငွေ အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ နှင့် ထိုအ ချက်အလက်များ အားအခြေခံ၍ ရရှိလာသော သတင်းအချက်အလက်များ အစရှိသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ကောက်ယူမည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ သတင်း အချက်လက်များတွင် လူကြီးမင်း၏အမည်၊ မွေးသက္ကရစ်၊ နေရ ပ်လိပ်စာ၊ email လိပ်စာ၊ အိမ်ထောင်စုအခြေအနေ၊ စုစုပေါင်း မှီခို သူဦးရေ၊ ဘဏ်စာရင်းအချက်အလက်များ (မိုဘိုင်း ဘဏ်စာရင်း အချက်အလက်များ အ ပါအဝင်)၊ ချေးငွေ ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ (ချေးငွေပြန်လည်ပေးဆပ်မှုနှင့်လက်ကျန်ချေးငွေပမာဏ)၊ ဝင်ငွေ၊ အလုပ်ရှင်၏အချက်အလက်များ၊ အခြားသတင်းအချက်အ လက်များဖြစ်သည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် အစရှိသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာသတင်းအချက်အလက်များကောက်ယူရန် ပျက်ကွ က်ပါက အဓိက ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အကျိုးဆက်များမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ရာ အချက် အလက်များ အကဲဖြတ်ရာတွင် မပြည့်စုံစေ ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ခွင့်ပြုပေးခြင်း တို့တွင် နှောင့်နှေးခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေပါသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်လူကြီးမင်း၏ ဘာသာရေး (သို့မဟုတ်) ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များ ကဲ့သို့ အရေး ကြီးသည့်အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပေးအ ပ်ရန် လူကြီးမင်းအား တောင်းဆိုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် တစ်ခါတစ်ရံ၌ လူကြီးမင်း ၏အရေးကြီးသော သတင်းအချက်အ လက်များကိုထိန်းသိမ်းထားရှိရန် (သို့မဟုတ်) ထိုအရေးကြီး သည့်သတင်းအချက်အလက်များ အခြေ အ နေအရပေးအပ်ရန် လိုအပ်လာနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကို ပေးအပ်ရန် သဘောတူ ခွင့်ပြုခြ င်း) ဤသို့သော အခြေအနေမျိုးတွင်၊ ထိုကဲ့သို့ အရေးကြီး သည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားရှိရန် ကျွန်ု ပ်တို့ အား သဘောတူညီပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းအချက်အလက်များကို အီလက်ထ ရော နစ်နည်းဖြင့် အင်တာနက်မှကောက်ယူခြင်း၊ မိုဘိုင်း ဖုန်း (သို့မ ဟုတ်) ဖုန်းအပလီ ကေးရှင်းများအပြင် လက်တွေ့မေ းမြန်း ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းအား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုပေးရန်နှင့် ပိုမို ထိရောက်သော ၀က်ဘ်ဆိုက်နှင့် မိုဘိုင်းအပလီ ကေးရှင်းများ ပေးရန် ‘cookies’ ဟုခေါ်သည့်နည်းပညာကို ကျွန်ုပ်တို့အသုံး ပြု နိုင်ပါသည်။ ‘cookie’ဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ ဆာဗာမှ လူကြီးမင်း၏ ကွန်ပျူတာ ပေါ်တွင် ထားရှိသော သေး ငယ်သည့် စာသားဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထို ‘cookie’များအား ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာဆာဗာများမှ ရယူ နိုင်သည်။ ‘cookie’များကို မကြာခဏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် အသုံးပြု လေ့ရှိ ပြီး လူကြီးမင်း၏ သဘောတူညီမှုနှင့် ရွေးချယ်မှုများဖြင့် လူကြီး မင်း၏ အင်တာနက် Browser များအား ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့် cookie ကို မည်ကဲ့သို့ လက်ခံမည်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ (သို့မဟုတ်) ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုပေးသူများက cookie များကို ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးအတွက် အောက်ပါအ တိုင်း အသုံးပြု နိုင်သည်။
– လူကြီးမင်း၏အင်တာနက် Browserအတွက် သီးသန့် နံပါတ်တ စ်ခုကို သတ်မှတ်ရန်၊
– ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို လူကြီးမင်း၏လိုအပ်ချက်အလိုက် ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်ရန်၊
– အချက်အလက်များ ကောက်ယူရန် (သို့မဟုတ်) အမူအကျင့်ဆို င်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံး ပြုရန်;
– အခြား၀က်ဘ်ဆိုဒ်များ ၀င်ရောက်ထားခြင်းရှိ မရှိ ခွဲခြားရန် နှင့်
– အခြား လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသုံးပြုရန် ။
အချို့သောအခြေအနေများတွင် cookies များ၊ pixel များ၊ re-directs နှင့် tag တို့ကို အသုံးပြုခြင်းမှ ကောက်ယူရရှိသော အချက်အလက်များ သည် လူကြီးမင်းအား မည်သူမည်၀ါအဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်စေပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ (သို့မဟုတ်) အရေးကြီးသည့်သတင်း အချက်အ လက်များကို ပါ၀င်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် (သို့မဟုတ်) ၀န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြု ခြင်းအားဖြင့် လူကြီးမင်းသည် cookiesများ၊ pixel များ၊ re-directs နှင့် tag များကိုအသုံးပြုရန်အတွက် သဘောတူညီပြီး (သို့မဟုတ်) သတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူရန်နှင့် အခြားပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ အသုံးပြုရန် သဘောတူပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာနှင့် ချေးငွေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ကောက်ယူခြင်းဖြင့်
လူကြီးမင်းကို မည်သူမည်၀ါအဖြစ် ခွဲခြားစေနိုင်ပြီး သင့်တော်သောစစ်ဆေးမှုများ နှင့် အခြားလုံခြုံရေးအရ စစ်ဆေး မှုများပြု လုပ်နိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏လိုအပ်ချက်များကို နားလည်သိရှိနိုင်ပြီး လူ ကြီးမင်းအား ကုန်ပစ္စည်း (သို့မဟုတ်) ၀န်ဆောင်မှုများ အား ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ပါ သည်။
ချေးငွေ (သို့) ၀န်ဆောင်မှုများခွင့်ပြုရန် အကဲဖြတ်ခြင်း နှင့် ချေးငွေမှတ်တမ်းများရယူခြင်းအပါအ၀င် ဖြစ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ကို သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
ချေးငွေ (သို့) ၀န်ဆောင်မှုများခွင့်ပြုပေးအပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်ပြီး အရည်အချင်းပြည့်မီမှုကို အကဲဖြတ်ခြင်း။
၀န်ထမ်းများနှင့် ကိုယ်စားလှပ်ဆောင်ပေးမည့်သူများအား စီမံခန့်ခွဲ၍၊ လေ့ကျင့်သင်ကြားရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာ စေခြင်းဖြင့် အလုပ်ဆက်လက် ခန့်အပ်ထားနိုင်ရန် (ကျွန်ုပ်တို့၏၀န်ထမ်းများနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်)။
ပေးရန်ရှိချေးငွေများအား ကောက်ခံခြင်းနှင့် ပြန်လည်ရ ရှိရန် စီရင်ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် လူကြီးမင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အ ကြား ဆက်သွယ်ရေးကို တည်ဆောက်ခြင်း။
တိုင်ကြားမှုများနှင့်အငြင်းပွားမှုများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့များနှင့် အခြားအာဏာပိုင် အဖွဲ့ အစည်းများအား သတင်း ပေးပို့ခြင်း။
ဝယ်ယူသူစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်နှင့် ချေးငွေနှင့်၀န်ဆေ ာင်မှုများ တိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်များ အ တွက် လေ့လာဆန်း စစ်ခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမျာ းပြုလုပ်ခြင်း။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားအဖွဲ့အ စည်းများမှရရှိသော သတင်းအချက်အလက်နှင့် ကျွန်ု ပ်တို့ ကောက်ယူ ထားသောအချက်အလက်များကို နှိုင်း ယှဉ်၍ ကိုက်ညီမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ (ထို့အတူ ကျွန်ုပ်တို့မှလည်း ဤရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ရရှိထား သည့် အချက်အလက်များကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။)
လက်ရှိ (သို့မဟုတ်) အခြား ချေးငွေနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအ သစ်များ ပြုလုပ်ဖန်တီးသွားနိုင်ရန်၊ လူကြီးမင်း၏လိုအ ပ်ချက်အရ အခြား ဝန်ဆောင်မှု အသစ်များနှင့်အ ခွင့်အ လမ်းများကို ရွေးချယ်၍ ပေးအပ်သွားနိုင်ရန်။
ချေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များကို ရှာဖွေရန် (သို့) တိုး တက်ကောင်းမွန်လာအောင်ဆောင်ရွက်ရန်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဲ့သို့သော မြန်မာနိုင်ငံတော်ရှိ မှတ်ပုံတင်အဖွဲ့အစည်းများ မှ တဆင့် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးအတွက် မှတ်ပုံတ င်ခြင်း။
မမှန်ကန်သော (သို့မဟုတ်) မပြည့်စုံသောသတင်းအ ချက်အ လက်များကို ပေးအပ်ခြင်း (သို့) ပေးရန်ပျက်ကွက်ခြင်းများရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်ပေးရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။
သင့်လျော်ပြီးဖြစ်နိုင်ရင်ရှိပါက လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အ ချက် အလက်များကို လူကြီးမင်းထံမှ တိုက်ရိုက်ကောက်ယူ ပါ မည်။ ထို့အတူ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကို သတင်းပို့သည့်အဖွဲ့များ၊ လူကြီးမင်း၏ ဘဏ်အကောင့်မှ ပံ့ပိုးပေး သူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ အခြား ချေးငွေဆိုင်ရ ာဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ စျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူ များ ၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆော င်မှု ပေးသူများနှင့် Facebook ကဲ့သို့သော အခြားဆက်သွယ်ရေး လူမှုမီဒီယာများမှလည်း လိုအပ်သလို ကောက်ယူမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်နှင့် စတင်ဆက်သွယ်လာသည်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ကောက်ယူထား ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိ လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်၌ အသုံးပြုပုံ စည်းကမ်းချက်များကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော အခြားဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအား လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖော်ပြပေးအပ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်စီစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်ယူခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖော်ပြခြင်း များပြုလုပ်သည့် သတင်း အချက်အလက်မှတ်ပုံတင်သည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ချေးငွေ ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် သတင်းပေးပို့သည့်အဖွဲ့အ စည်း များ၊ ချေးငွေကောက်ခံပေးသူများ နှင့် စျေးကွက် အတွင်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ။
ထို့အတူ အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများထံသို့ သတင်းအ ချက်လက်များကို ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းများ သို့ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ
ဈေးကွက်အတွင်းတိုက်ရိုက်၀န်ဆောင်မှုပေးသူများ (ချေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးမည့် အခြားဆက်စပ်လု ပ်ငန်းများ). အကယ်၍ လူကြီးမင်းမှ ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို ရယူလိုခြင်းမရှိပါက ဤမူဝါဒ၏ အဆုံး၌ ဖော်ပြ ထားသည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ဆက်သွယ်၍ အချိန်မရွေး ငြင်းပယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အတူ စျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်း ဆိုင်ရာ သတင်းများကို အီးမေးလ်ဖြင့် ရယူထားပါက unsubscribe လုပ်ခြင်းဖြင့် ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်စားပြုသူ မည်သူမဆို (သို့မဟုတ်) လူကြီးမင်း၏ သတင်းအချက်အလက်များ ဖော်ထု တ်ခြင်းကို သဘောတူသူ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့သူ၊ ဘဏ်များ၊ အေးဂျင့်များ (သို့) အကြံပေးများ( သို့) ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးနှင့်သဘောတူ စာချုပ်အား လုပ်ပိုင်စီမံခွင့်ရှိသူ (သို့) ပိုင်ဆိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် မည်သည့်အဖွဲ့အ စည်းမဆို။
လုပ်ငန်း၏လိုအပ်ချက်အရ သို့မဟုတ် အောက်ပါအ တိုင်း ခွင့်ပြုထားသောတရားဥပဒေများအရ ဆောင်ရွ က်နိုင်သည် –
-ငွေကြေးခဝါချမှုကိုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (၂၀၁၄ခုနစ် )နှင့် အခြားထုတ်ပြန်ထားသောလမ်းညွှန်ချက်များ
– နိုင်ငံသားများ ၏ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆို င်ရာလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေ (၂၀၁၇ခုနှစ်)
– ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေ (၂၀၁၆ခုနှစ်)
သတင်းအချက်အလက်နှင့် အခြားအခြေခံစနစ်များအား ပံ့ပိုးပေးနေသောကုမ္ပဏီများ
ဈေးကွက်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အခြားချေးငွေဆိုင်ရာပံ့ပိုးပေးသူများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို (ပုဂ္ဂိုလ်ရေ းအချက်အလက်များနှင့် ချေးငွေဆိုင်ရာချက်လ က်များ အပါအဝင်) အခြားစျေးကွက်မြှင့်တင်ရေး ကုမ္ပဏီများနှင့် ချေးငွေပံ့ပိုးပေးသူများထံသို့ အသုံးပြု နိုင်ရန်အတွက် ပေးအပ်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လဲလှယ်ခြင်း များပြု လုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသတင်းအ ချက်အလက်များ ကို အေးဂျင့်များ၊ ကန်ထရိုက်တာ များ(သို့) စျေး ကွက်မြှ င့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများ၏အ ကြံပေးများ၊ ချေး ငွေ ပံ့ ပိုး ပေးသူများသို့လည်း ဖော်ပြ နိုင်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေးအတွက်သုံးပြုသည့် Facebook Messenger ကဲ့သို့ အခြားဆက်သွယ်ရေးအ က်ပလီ ကေးရှင်းများ။
စျေးကွက်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် လူမှုရေး မီဒီယာဆက်သွယ်ရေး နည်းလမ်းများဖြစ်သည့် Facebook အက်ပလီကေးရှင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ အရေး အသွေးတိုးမြှင့်ရန်အတွက် အကူအညီပေး နေ သော အခြားအဖွဲ့အစည်းများ။
အင်တာနက်စာမျက်နှာများအား လေ့လာဆန်းစစ်ရာတွင် အကူအညီပေးသည့် အဖွဲ့များ။
စိတ်ဝင်စားမှု မှတ်တမ်းများ၊ ဆင့်ပွားကြော်ငြာခြင်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်များ၏ အထင်အမြင်များကို အစီ အရင်ခံပေးသူများ
ဝန်ဆောင်မှုရယူသူများ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ စီးပွားရေး ( သို့မဟုတ်) ဗျူဟာအရလေ့လာဆန်းစစ်မှုများနှင့် အခြား ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း များ
အုပ်ချုပ်ရေး (သို့မဟုတ်) စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ၊ စာရင်းစစ်များ နှင့် စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု အတိုင်ပင်ခံများ
– ပုံနှိပ်ခြင်း၊ email ပို့ခြင်း အစရှိသည့် ဒစ်ဂျ စ်တယ်နည်းလမ်းဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ
– ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းစီမံခန့်ခွဲသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ
– အင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင်အများဆုံးရှာဖွေရစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးသူများ
– ချေးငွေဆိုင်ရာ အစီရင်ခံပေးသည့် အေဂျင်စီများ
လူကြီးမင်း၏ အလုပ်ရှင်၊ သက်သေခံပေးမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ စိစစ်ခြင်းကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ
အထက်ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက်များကို လက်ခံမည့်သူများသည် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင်တည်ရှိပြီး ယူအက်စ်အေ၊ ဥရောပ၊ စင်ကာပူအ ပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတွင် ထိုသတင်းအချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
လူကြီးမင်း၏ အမည်နှင့် လိပ်စာကဲ့သို့သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များပါဝင်သည့် ထောက်ခံချက်များ၊ အကြံပြုချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ထုတ်ပြန်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသော လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ဖယ်ရှားလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ ဆက်သွယ်ရန်နည်းလမ်းများဖြင့် ပေးပို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ချေးငွေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက် အလက်များကို ကောက်ယူထိန်းသိမ်းထားပြီး ချေးငွေဆိုင်ရာ အစီအရင်ခံသည့်အ ဖွဲ့များနှင့် အခြားအလားတူ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်လည်း လဲလှယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ချေးငွေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ အီလက်ထရောနစ်ပုံစံဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အိုင်တီဆာဗာ များပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး စာရွက်များဖြင့်လည်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ချေးငွေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအ ချက်အလက်များကို သိမ်း ဆည်းရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် cloud storage ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပြီး ထိုအိုင်တီဆာဗာများမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် (သို့မဟုတ်) ပြင်ပတွင် ထား ရှိနိုင်ပါသည်။
ချေးငွေဆိုင်ရာအစီရင်ခံသည့်အဖွဲ့များမှ လူကြီးမင်း၏ ချေးငွေနဲ့ သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များကို ရရှိသောအခါ အများပြည်သူ သိရှိ နိုင်သည့်သတင်းအချက်လက်များနှင့် အခြားချေးငွေဆိုင်ရာဖောက်ဖျက်မှုများကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူကြီးမင်း၏ ချေးငွေ နှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်း အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား အ ထောက်အ ပံ့ပေး နေသည့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ ထုတ်ဖော်ပြသသွား မည်ဖြစ်ပြီး ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည် ယူအက်စ်၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် စင်ကာပူ နိုင်ငံများအပါအ၀င် အခြားနိုင်ငံရပ်ခြားများတွင် တည်ရှိနိုင်သည်။
လူကြီးမင်း၏ ချေးငွေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအ ချက်အ လက်များကို ချေးငွေအစီရင်ခံသည့် အဖွဲ့များနှင့်လဲ လှယ်နိုင်သည်။ ချေးငွေအစီရင်ခံ ရေးအဖွဲ့များသည် ချေးငွေနှင့်ပတ်သက်သေ ာသတင်းအချက်အလက်များကို ချေးငွေပေးသူများအား ချေးငွေ ပြန်လည်ပေးဆပ်နိုင် အကဲ ဖြတ်ရန်၊ ချေးငွေ(သို့မဟုတ်) ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် လျှောက်ထားမှုများကို အကဲဖြတ်ရန်နှင့် ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အစရှိသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များ လုပ်ဆောင်ကြသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပေးအပ်ထားသော ချေးငွေ(သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြန်လည်ပေးချေမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွ က်ခဲ့ပါက(သို့မဟုတ်) ကြီးလေးသော ငွေကြေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုများကျူးလွန်ခဲ့ပါက ချေးငွေအ စီ ရင်ခံ ရေးအဖွဲ့များသို့ လူကြီးမင်း၏ ချေးငွေ ဆိုင်ရာသတင်း အချက်လက်များကို ပေးပို့ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
တခါတစ်ရံတွင် လူကြီးမင်း၏ချေးငွေနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအ ချက်လက်များကို ချေးငွေထောက်ပံ့ပေးသူများ၏ တောင်းဆိုမှု အရ ချေးငွေ စီစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ချေးငွေအစီ ရင်ခံရေးအဖွဲ့များမှ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍လူကြီးမင်းသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းကို ခံရပါက ချေးငွေအစီရင်ခံရေးအဖွဲ့များသို့ ဆက်သွ ယ်အကြောင်း ကြားသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်၊ ချေးငွေများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများကို အသုံး ပြုသူများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်၊ ဝန်ဆော င်မှုရယူ သူများ၏ လိုအပ်ချက်ကိုပိုမိုနားလည်လာနိုင်စေရန်နှင့် အသုံးပြုနေသည့်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများကို ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ [ဥပမာ – စက်ပစ္စည်း၏ IP လိပ်စာ (အမည်မသိပုံ စံဖြင့်သာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း)၊ ကိရိယာအမျိုးအစား၊ (သီးသ န့်စက်ပစ္စည်းအမှတ်အသား)၊ browser အချက်အ လက်နှင့် ပထဝီ ဆိုင်ရာတည်နေရာ (နိုင်ငံအတွက်သာ)] သတင်းနည်းပညာကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကြော်ငြာ cookies များ၊ code နှင့် identifiers များမှတဆင့် အချက်အလက်များကို ကောက်ယူပါသည်။
ထိုသတင်းအချက်လက်များအား အသုံးပြုသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချ င်းစီခွဲခြားရန် (သို့မဟုတ်) ကိုက်ညီမှုများရှိရန် ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြု မည်မဟုတ်ပါ။
လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လုံခြုံ သောနေရာ၌ သိမ်းဆည်းထားခြင်းအားဖြင့် သင့်လျော်သည့် လုပ်ဆောင်ချ က်များကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို စာရွက်နှင့် အီလက်ထရော နစ်ပုံ စံဖြင့် သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ထို့အတူ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို အလွှဲသုံးစား ပြုလု ပ်ခြင်း ၊ ဆုံးရှုံးစေခြင်း၊ ခွင့်ပြု ချက်မ ရှိ ဘဲအသုံးပြုခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းများမပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် သ င့်လျော်သည့်လုပ်ဆောင်ခြင်းများကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့မှ ဆောင်ရွ က်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားရှိသော လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တ ာအချက်အလက်များသည် တိကျမှန်ကန်ပြီး ပြည့်စုံစေရန် အရေးကြီးပါသည်။ လူကြီးမင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြား ဆက်သွ ယ်ဆောင်ရွက်နေသောကာလအတွင်း လူကြီးမင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာအချက်အလက် တစုံတရာ ပြောင်းလဲမှုရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ အား အကြောင်းကြားပေးရန် တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင်လိုပါက ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မှန်ကန်တိ ကျပြီး ပြည့်စုံသည့် သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိ စေရန်မှာ လူကြီးမင်းအပေါ်တွင် ယေဘူယျအားဖြင့် များစွာ မူတည်နေပါသည်။
သတင်းအချက်အလက်များ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းသိမ်းထားရှိထားသော လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် အ တွက် ဆောင်ရွ က်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်း သိမ်း ထားရှိထားသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက် အလက်များကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ နည်း လမ်း များဖြင့် ဆက်သွယ်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ သတင်း အ ချက်အလက်များကို ပြန်လည်ရယူခြင်းနှင့် ရရှိ ရန်ပံ့ပိုး ပေး ခြင်း များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့မှ အခကြေးငွေကို ကောက်ခံ နိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းမှ တောင်းဆိုလာသည့် ပုံစံပေါ်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့မှ ထို တောင်းဆိုမှုကိုချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့မ ဟုတ်ပါက တောင်းဆိုမှုကိုလက်ခံရရှိပြီး (၇) ရက်အတွင်း လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုတောင်းဆိုမှုများကို စနစ်တ ကျ စစ်‌ ဆေးနိုင်ရန်အ တွက် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွ ယ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်သည်။
သို့ရာတွင် လူကြီးမင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသတင်းအချက်အ လက်များကို လူကြီးမင်းမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ဆောင်ပေးရန်မ လိုအပ်သော အခြေအနေများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၎င်းသတင်းအချက်အလက်သည် တရားစွဲ ဆိုမှု များနှင့် ပတ်သက်နေပါက (သို့မဟုတ်) လူကြီးမင်း၏ တောင်းဆို ချက်သည် အငြင်းပွားဖွယ်တစုံတရာ ဖြစ်ပေါ်နေပါက စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တ ာအချက် အလက်များနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ဝယ်‌ရာ က်ကြည့်ရှုခွင့် တောင်းဆိုမှုကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ငြင်း ပယ်ခဲ့ပါက ငြင်း ပယ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းအား ပေးပို့သွားမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းသိမ်းထားသော လူကြီးမင်း၏ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာအချက်လက်များမှာ မမှန်ကန်ခြင်း၊ တိကျမှုမရှိခြင်း၊ သက်တမ်း ကျော်လွန်နေခြင်းများရှိပါက ဤမူဝါဒ၏ အဆုံး သတ်တွင် ဖော်ပြသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြ င်ဆင်ရန် ဆက်သွယ်အကြောင်း ကြားနိုင်သည်။ ထို့အတူ ကျွန်ု ပ်တို့ မှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များဖြင့် ပြင်ဆင်ရ န်ငြင်းဆိုခဲ့ပါက မပြင်ဆင်ရသည့်အကြောင်းရင်း များကို ပေး အပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံပိုင်အစိုးရ၏ သက်သေခံလက်မှတ်များအား အသုံးပြုခြင်း
အကယ်၍ နိုင်ငံပိုင်အစိုးရ၏သက်သေခံလက်မှတ်များဖြစ်သည့် မှတ်ပုံတင်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်နံပါတ် အစရှိ သည်တို့ကို တောင်းယူကောက်ခံသွားပါက ထိုသက်သေခံလက်မှ တ်များအား ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသော အကြောင်းအရာများ မှလွဲ၍ အသုံးပြုခြင်း ထုတ်ဖော်ခြင်းများမရှိပါ။ နိုင်ငံပိုင် အစိုးရ၏သက်သေခံလက်မှတ်များအား လူကြီးမင်း၏ သက်သေခံ အထောက်အထားအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ဆေ ာင်ရွက်နေ သောကာလအတွင်းသာ အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်သည်။
လူကြီးမင်းအား ခွဲခြားဆန်းစစ်ခြင်းမပြုဘဲ လုပ်ဆောင်သည့်လုပ်ငန်းများ
အချို့သောအခြေအနေအများစုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ ချေးငွေ သို့မ ဟုတ်၀န်ဆောင်မှုများ၊အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကမ်းလှမ်းချက်များ အစ ရှိသည်တို့ကို စုံစမ်းမေးမြန်းမှုများအပါအ၀င် ဆက်သွ ယ်ဆေ ာင်ရွက်ခြင်းများ အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အတွက်လူကြီးမ င်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များအ ားသေချာစွာ ဆန်းစစ်သွ ားရန် လိုအပ်ပါသည်။ သို့‌သော် အချို့သောအခြေအနေများတွင် လူကြီးမင်း၏ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာအချက်လက်များ မ‌ပေး အပ်ရ သော လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်ငြား လည်း ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်သ တင်း အချက်လက်များသည် ကန့်သတ်မှုများရှိပါသည်။
လူကြီးမင်း၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ကျွန်ုပ်တို့မှ မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုသည်ကိုကျေနပ်မှုမရှိပါက သို့မဟုတ် တိုင်ကြား ချက်တစုံတ ရာရှိပါက တိုင်ကြားမှုများကိုင်တွယ်သည့်မိမိ တို့၏ဝန်ထမ်းအား ဤမူဝါဒ၏အဆုံးသတ်တွင် ဖော်ပြထ ားသောနည်းလမ်းများဖြင့် ဆက်သွယ်နို င်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် အခြားသတင်း အချက်အလ က်များတောင်းခံနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် လူကြီး မင်း၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး နှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ အချက်လက်များ ကိုင်တွယ်ပုံ နှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက်များ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှု မူဝါဒပြောင်းလဲခြင်းများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမူဝါဒအားအခါအားလျော်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားသော မူဝါဒအား ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆို က်ပေါ်တွင် ဖော်ပြထားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းဖော်ပြထားနေ့မှ စတင်၍ အကျိုးသက်ရောက်စေမည် ဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့် ပတ်သက်သော မေးမြန်း ချက်များ၊ တိုင်ကြားမှုများ သို့မဟုတ် အခြားတောင်းဆိုမှု များ အတွက် လူကြီးမင်းသည် အောက်ပါနည်းလမ်းများအသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ဤမူဝါဒကို ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ‌ရေးဆွဲပြင်ဆင်ထားသည်။
ရေးဆွဲပြင်ဆင်သောနေ့: ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ခုနှစ်
၁။ မူဝါဒထုတ်ပြန်ချက် ၃
၂။ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် ၄
၃။ စံပုံစံ နှင့် တိုးမြှင့် စီစစ်‌လေ့လာခြင်းများ ၆
၄။ အဖွဲ့အစည်း သို့ အသင်း အဖွဲ့၏ ပိုင်ရှင်များအားစီစစ်ခြင်း ၈
၅။ ဌာနအတွင်း ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့်စောင့်ကြည့် ကြည့်ရှု့ခြင်း ၉
၆။ ကြားခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ အမှီပြုမှု ၁၀
၇။ တားမြစ်ထားသည့်အမည်မသိပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အကော့င်များ ၁၁
၈။ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ၁၁
၉။ အစီရင်ခံရန်တာဝန်များ ၁၂
၁၀။ ဝန်ထမ်းများအတွက် AML/CTF ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသော အစီအစဉ်များ ၁၂
Rent2Own (Myanmar) Co. Ltd ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကို အပြည့်အဝလိုက်နာရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပါသည်။ထို့အတူ Rent2Own (Myanmar) Co. Ltd သည် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် အခြားတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကို တားဆီးကာကွယ်ရန်အတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနှင့် ထုတ်ပြန်ထားသည့်စည်းမျဉ်းများပါ ပြဌာန်းချက်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဤပေါ်လစီထုတ်ပြန်ချက်သည်Clients များနှင့် ၀န်ထမ်းများအားလုံးကို R2O ၏မူဝါဒနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာလာရန် ရေးဆွဲပုံဖော်ထားပြီး R2O၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ဆောင်ရွက်မှုများအား ငွေကြေးခဝါချမှု (သို့မဟုတ်) အခြားတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများမှ အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် ပုံဖော်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
အကယ်၍ R2O (သို့) ၎င်း၏ဝန်ထမ်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများအား ငွေကြေးခဝါချခြင်း အတွက် အသုံးပြုခြင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း(သို့မဟုတ်) အခြားတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် မရည်ရွယ်ဘဲ အသုံးပြုမိပါက R2O သည် ကြီးလေးသော တရားမဥပဒေနှင့် ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်များကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဝန်ထမ်းများ၊အရာရှိများ၊ဒါရိုက်တာများနှင့် ၀န်ထမ်းတစ်ဦးတယောက်ချင်းစီသည် ဤဖော်ပြချက်တွင်ပါရှိသည့် မူဝါဒနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အကျွမ်းတဝင်နားလည်မှုရှိပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အလွန်အရေးပါပါသည်။
အဆိုပါ R2O ၏ မူဝါဒများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လိုက်နာကြောင်းသေချာစေရန်အတွက် R2O ၏ AML / CTF ဆိုင်ရာ အရာရှိအား ခန့်အပ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အတူ R2O သည် သံသယဖြစ်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်နှင့် အမည်ပျက်စာရင်းဝင်သော Clients များ ၊ R2O ၏ ဝန်ထမ်းသို့မဟုတ် Clients များ ဖြစ်လာနိုင်မည့်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် (Anti-Fraud) လိမ်လည်မှုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ခန့်အပ်ထားသော AML / CTFဆိုင်ရာအရာရှိသည် ဝန်ထမ်းများအား AML / CTF နှင့် ပတ်သတ်သော ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာခြင်း၊ ချိုးဖောက်ခြင်းများ ၊ စီမံအုပ်ချုပ်သူများအား အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းကိစ္စရပ်များအတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
ဤမူဝါဒ ရေးဆွဲ ပြင်ဆင်သောနေ့တွင် ချေးငွေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ဌာန (Credit Bureau) သည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။
“ AML / CTF ဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများ” ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများကိုဆိုလိုပြီး အောက်ပါဥပဒေများ ပါဝင်ပါသည်။
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ အမှတ် ၂၄/၂၀၁၅
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက် အမှတ် ၄၅/၂၀၁၉
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာအသိပေးကြေညာချက် အမှတ် ၁၂၀၁/၂၀၁၅
အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ အမှတ် ၂၃/၂၀၁၄
အကြမ်းဖက်မှုများအားငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းမှ တိုက်ဖျက်‌ရေးဥပဒေ အမှတ် ၁၂၀၂/၂၀၁၅
“Compliance Officer” ဆိုသည်မှာ R2Oမှ ခန့်အပ်ထားသော လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုများအားစစ်ဆေးပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်ရှိသည့် အရာရှိအား ဆိုလိုပါသည်။ R2Oမှခန့်အပ်ထားသော ထိုအရာရှိမှာ အောက်ပါတို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အခွင့်အာဏာအပ်နှင်းထားသောသူဖြစ်ပါသည်။
မိမိ၏ စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် စာရွက်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများနှင့် စာရင်းအချက်အလက်များအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခွင့်ရှိခြင်း။
R2O ၏ မည်သည့် ဝန်ထမ်းထံမှမဆို သတင်းအချက်အလက်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်များအား တောင်းယူစစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း
“Counter Financing of Terrorism Laws & Regulations”ဆိုသည်မှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၄ ရက် ရက်စွဲပါ အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေ) အမှတ် ၂၃-၂၀၁၄ နှင့် အကြမ်းဖက်မှုများအား ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းမှ တိုက်ဖျက်‌ရေးဥပဒေ အမှတ် ၁၂၀၂/၂၀၁၅ ကိုဆိုလိုသည်။
“CDD” ဆိုသည်မှာ Customer များအားသင့်လျော်ကြောင်းစီစစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
“Domestic and foreign politically exposed person” ဆိုသည်မှာ ပြည်တွင်း သို့မဟုတ် ပြည်ပတိုင်းပြည်များတွင်မဆို ထင်ရှားသော အများပြည်သူဆိုင်ရာတာဝန်အပ်နှံခြင်းခံရသူများ၊ ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ သို့မဟုတ် ထိုပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်နီးစပ်သူများ အစရှိသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
“Family Book” ora“Household List” အိမ်ထောင်စုစာရင်း” ဆိုသည်မှာ မိသားစု သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်စုဝင်များ၏ သတင်းအချက်အလက် (မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ မွေးရက်၊ ကျားမ၊ နိုင်ငံသား၊ အလုပ်အကိုင်၊ လိပ်စာ) အစရှိသည်တို့ပါဝင်သည့် စာရွက်စာတမ်းကို ဆိုလိုသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာနမှ အိမ်‌ထောင်ဦးစီးအားစစ်ဆေးပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရုံး၌ လျှောက်ထားပြီး ခွင့်ပြုထုတ်ပေးထာပါသည်။ ၎င်းစာရွက်စာတမ်းကို ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှလက်မှတ်ထိုးထားမညါဖြစ်ပြီး နေထိုင်ကြောင်း လိပ်စာအထောက်အထားအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
“Financing of Terrorism” အကြမ်းဖက်မှုအားငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းဆိုသည်မှာ မည်သည့်အကြမ်းဖက်သမား (သို့မဟုတ်) မည့်သည့်အကြမ်းဖက်သမားများကိုမဆို အသုံးပြုမည်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် (သို့မဟုတ်) ၎င်းငွေကြေးများအား အပြည့်အဝ(သို့မဟုတ်) တစိတ်တစ်ပိုင်းအား တိုက်ရိုက်သို့ သွယ်ဝိုက်၍ ပေးအပ်ခြင်း၊ ဖုံးကွယ်ထားခြင်း၊ ပြည်ပသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း (သို့မဟုတ်) လွဲပြောင်းစေခြင်း၊ အခြားတဦးဦးသို့ လွဲပြောင်းခြင်း၊ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်)အကြမ်းဖက်သူကိုယ်စား သိမ်းဆည်းထားခြင်း၊ ကူညီရန်ကြိုးပမ်းခြင်း၊ ကျူးလွန်ရန်အထောက်အပံ့ပေးခြင်း အစရှိသည်တို့ကို ဆိုလိုပါသည်။
“International politically exposed person” နိုင်ငံတကာတွင် နိုင်ငံရေးအရ ဖော်ပြခြင်းခံရသော ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသည်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ၎င်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ၊ သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များ ၊ ၎င်းတို့၏မိသားစုဝင်များနှင့် နီးစပ်သူများကို ဆိုလိုသည်။
“Money laundering” ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုသည်မှာ အောက်ပါတို့ကို ဆိုလိုပါသည်။
ငွေကြေးနှင့်ပစ္စည်းများ၏ တရားမဝင်ဇစ်မြစ်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ထားသောရာဇဝတ်မူများမှ ရရှိလာသော ငွေကြေးများကိုလွှဲပြောင်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူခံရခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် ၎င်းကျူးလွန်မှုတွင် ပါဝင်သူများကို ကူညီခြင်း။
ငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း၊ လက်ခံရရှိသည့်အချိန်တွင် ထိုငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုသည် ရာဇဝတ်မှု၏အကျိုးအမြတ်ဖြစ်ကြောင်းသိခြင်း သို့မဟုတ် သိရှိကြောင်းအကြောင်းပြချက်ရှိခြင်း.
အထက်ဖော်ပြပါတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် သို့မဟုတ် ကြိုးပမ်းရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းတခုခုတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ကူညီခြင်း၊ လွယ်ကူရန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
ရရှိလာသောငွေကြေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ ခဝါချခြင်းတွင်အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည် –
က။ ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုများတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ ထောက်ပံ့ခြင်း၊ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း နှင့် ရာဇဝတ်ဂိုဏ်း၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်း။
ခ။ အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက်ခြင်းကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ လူကုန်ကူးခြင်းနှင့် လူမှောင်ခိုကူးခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများ၊ ခိုးယူခံရသည့်ပစ္စည်းများနှင့် အခြားတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းများအား မှောင်ခိုကူးခြင်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးအတုများ၊ လူကုန်ကူးမှု၊ လူသတ်မှု၊ ကလေးငယ်များအားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်ခြင်းအပါအဝင် ဓားစာခံပြုခြင်း၊ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းတုများ၊ လုယက်ခြင်းသို့မဟုတ်ခိုးယူခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာရာဇ၀တ်မှု၊ မှောင်ခိုခြင်း၊ ငွေညှစ်ခြင်း၊ အတုပြုလုပ်ခြင်း၊ အခွန်ရှောင်လွှဲခြင်းနှင့်အခြားအခွန်ရာဇ၀တ်မှုများ၊ မူပိုင်ခွင့်ကူးယူခြင်း၊ အကြမ်းဖက်မှု၊ သတင်းအချက်အလက်ကိုပထမဆုံးသိကျွမ်းသူတစ်ဦးမှ တရားမဝင်အမြတ်အစွန်းရရှိရန်အတွက် သတင်းအချက်အလက်များကို ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားသူအားရောင်းဝယ်ခြင်းနှင့် စျေးကွက်ခြယ်လှယ်ခြင်းအားဖြင့် တရားမ၀င်အမြတ်အစွန်းရရှိစေရန်ပြုလုပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်၏တည်ဆဲဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ အနည်းဆုံးတစ်နှစ်နှင့် အထက်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရနိုင်သော ပြစ်မှုများ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေတရပ်ရပ်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းများ၊ ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့် ပြည်ပတွင်ကျူးလွန်ခဲ့သောပြစ်မှုမှရရှိလာသည့် ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများ အစရှိသည်တို့ပါဝင်သည့် ပြစ်မှုများ
“Ward or Village recommendation letter” ရပ်ကွက်သို့မဟုတ်ကျေးရွာထောက်ခံစာ ဆိုသည်မှာ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ ရရှိသော Customer ၏ နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်။
၃။ စံပုံစံ နှင့် တိုးမြှင့် စီစစ်‌လေ့လာခြင်း
R2O သည် အောက်ပါ စီစစ်‌လေ့လာခြင်း အမျိုးအစားများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်
၁။ ပထမဦးစွာ စံသတ်မှတ်ထားသော စီစစ်‌လေ့လာခြင်းနည်းလမ်းများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၂။ အကယ်၍ Customer သည် ဆုံးရှုံးနိုင်‌ချေအန္တရာယ်နည်းသည်ဟု မသတ်မှတ်ပါက ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်ဆောင်ရွက်မှုများအား ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန်အတွက် တိုးမြှင့်ထားသော စီစစ်‌လေ့လာခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ခ။ စံသတ်မှတ်ထားသော စီစစ်လေ့လာခြင်းပြုလုပ်သည့် အချိန်များ
စံသတ်မှတ်ထားသောစီစစ်‌ လေ့လာခြင်းနည်းလမ်းများကို customer နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများ
မပြုလုပ်မီ သို့မဟုတ် စာရင်းဖွင့်ခြင်းများမဆောင်ရွက်မီတွင် ဆောင်ရွက်ပါသည်။
ဂ။ တိုးမြှင့်ထားသော စီစစ်လေ့လာခြင်းပြုလုပ်သည့်အချိန်များ
၁။ စံသတ်မှတ်ထားသောစီစစ်လေ့လာခြင်းများမှ ၎င်း customer သည် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် နည်းပါးသည်ဟု မသတ်မှတ်ခြင်း
၂။ သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏ USD ၁၅၀၀ အား customer နှင့်ငွေပေးငွေယူ မပြုလုပ်မီ သို့မဟုတ် မည်သည့်ငွေကြေးနှင့်မဆို ပြုလုပ်ထားသော ၎င်းပမာဏနှင့်ညီမျှသည့် ငွေပမာဏအား တကြိမ် သို့မဟုတ် အကြိမ်များစွာ ငွေပေးငွေယူပြုလုပ်ခြင်း။
၃။ customer တဦးဦးအတွက် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပမှ အီလက်ထရောနစ်နည်းလမ်းဖြင့် လွှဲပြောင်းငွေ လက်ခံရရှိခြင်းမပြုမီ တွင် ပြုလုပ်ခြင်း။
၄။ သိမ်းဆည်းထားသော customer ၏ အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှု သို့မဟုတ် လုံလောက်မှု မရှိသည်ဟု သံသယဖြစ်ပါကဆောင်ရွက်ခြင်း။
၅။ ငွေကြေးခဝါချခြင်းသို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟု သံသယဖြစ်လျှင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၆။ အကယ်၍ လိမ်လည်မှုကာကွယ်ရေးဌာန (Anti-Fraud Dept.)မှ လိမ်လည်မှု၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့် လိမ်လည်မှု (သို့မဟုတ်) အမည်ပျက်စာရင်းသွင်းခြင်းသည်ဟု အကြောင်းကြားလျှင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။
ဃ။ စံသတ်မှတ်ထားသော စီစစ်လေ့လာခြင်းနည်းလမ်းများဆောင်ရွက်ပုံ
၁။ Customer ၏ အကြောင်းကို နားလည်သိရှိနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်လက်များကို ကောက်ယူပါသည်။
က။ အမည်အပြည့်အစုံ (အခြားအမည်များအပါအဝင်)
ခ။ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်
ဈ။ ဆက်သွယ်ပေးသူနှစ်ဦးနှင့် ၎င်း၏ဘဏ်စာရင်းများ (လက်ရှိစာရင်းရှင်အပ်ငွေစာရင်းအပါအဝင်)
၂။ အထက်ပါအချက်အလက်များကို ယုံကြည်စိတ်ချရသော သတင်းအရင်းအမြစ်များ စာရွက်စာတမ်းများ နှင့် အချက်အလက်များမှကောက်ယူထားပါသည်။ ထိုအတူ customer အကြောင်းသိရှိရန် ကောက်ယူသော စာရွက်စာတမ်းများတွင် အောက်ပါတို့ကို ကောက်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
ခ။ customer ၏ဓာတ်ပုံ
ဃ။ ရက်ကွက်/ကျေးရွာ နေထိုင်ကြောင်းထောက်ခံစာ
၃။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှု၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို
၄။ ၀ယ်ယူသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကို တွက်ချက်ရန် သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ၀င်ငွေနှင့်ကုန်ကျစရိတ်
၅။ Customers ၏ လျှောက်လွှာအတွက်အချက်အလက်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကို ကောက်ယူသော အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ချေးငွေအကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မစတင်မီ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသတင်းအချက်လက်များသည် ရန်ကုန်မြို့ရုံးချုပ်တွင် အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ၏ သတင်းစုဆောင်းသည့် စနစ်အတွင်း၌ ထည့်သွင်းထားပြီး စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပါသည်။
င။ တိုးမြှင့်ထားသော စီစစ်လေ့လာခြင်းများ
တိုးမြှင့်ထားသော စီစစ်လေ့လာခြင်းနည်းလမ်းများကို အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
၁။ Customer သည်အခြားသူ၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်တရား ၀င်ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဦး၏
၂။ customer ၏သံသယဖြစ်ဖွယ်သတင်းအချက်လက်များဖြစ်သည့် နာမည်နှငိ့ Customer မဟုတ်သည့် အရောင်းအဝယ်၏ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏သတင်းအချက်လက်
၃။ customer သို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူတစ် ဦး အား ‘ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှ မှနိုင်ငံရေးအရ ဖော်ပြခြင်းခံရသူ
သို့မဟုတ် အပြည်ဆိုင်ရာာတွင်ဖော်ပြ ခြင်းခံရသူဟုသံသယရှိလျှင်
၄။ စီမံအုပ်ချုပ်သူများထံမှ စီးပွားရေးဆက်သွယ်မှုများမပြုလုပ်မိ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်း။
၅။ ရရှိလာသောငွေကြေးနှင့် ကြွယ်ဝမှုများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကို
၆။ နိုင်ငံရေးအရဖော်ပြခြင်းခံရသူ၏ မိသားစုဝင်များနှင့်နီးစပ်သူများထံတွင် လိုအပ်သည့် စီစစ်လေ့လာမှုများပြုလုပ်ခြင်း
၇။ Customer ၏ သတင်းအချက်လှမ်းမှန်ကန်မှုကိုပြန်လည်စစ်ဆေးရန်အတွက် Customer ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် လူမှုမီဒီယာများ (Viber/Facebook) စသည်တို့ကိုအသုံးပြု၍စစ်ဆေးခြင်း
၄။ အဖွဲ့အစည်း သို့ အသင်း အဖွဲ့၏ ပိုင်ရှင်များအားစီစစ်ခြင်း
အကယ်၍R2O သည် အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့များပေါ်တွင် စစ်ဆေးခြင်းများပြုလုပ်ပါက သည် Customer ၏ ပိုင်ရှင်များအပေါ်တွင် လေ့လာစီစစ်ခြင်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်၏ အောက်ပါအချက်လက်များပေါ်မူတည်၍ သင့်တော်သော နည်းလမ်းများဖြင့် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်
က။ အကယ်၍ ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားတခုအနေဖြင့် ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည်ဆိုပါက
တရားဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးမှတဆင့် ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ် စီမံမှုကိုပြုလုပ်နေသောသူများအား
ခ။ အထက်ဖော်ပြပါပုဒ်မခွဲအရထိန်းချုပ်သူ ပိုင်ရှင် / ပိုင်ရှင် (များ) နှင့် (သို့) အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ် အသင်းအဖွဲ့သည် ပိုင်ဆိုင်မှုအကျိုးစီးပွားများမှ တစ်ဆင့်ထိန်းချုပ်မှုကို ကျင့်သုံးခြင်းရှိမရှိနှင့် အခြားနည်းလမ်းတခုခုဖြင့် ဆောင်ရွက်ထားသည်ဟုသံသယရှိလျင်။
ဂ။ အထက်ဖော်ပြပါပုဒ်မခွဲများအရ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါက R2O၏ စီမံခန့်ခွဲသည့်အရာရှိမှ ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်သည် မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားခြင်းကို ပြုလုပ်သင့်သည်။
၂။ အဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်အသင်းအဖွဲ့၏ တရားဝင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ
က။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု- ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ၊ ငွေကြေးထိန်းသိမ်းသူ သို့မဟုတ် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏
ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုဆက်ဆပ်မှုများမှတဆင့် ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကိုယ်ပိုင်က္ခဏာများ
ခ။ အခြားဥပဒေရေးရာအစီအစဉ်မျာ –
၅။ ဌာနအတွင်း ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့်စောင့်ကြည့် ကြည့်ရှု့ခြင်း
က။ R2Oမှ လုပ်ငန်းတွင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ မူဝါဒများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ (လိုအပ်ပါက) ရေးဆွဲခြင်း အသုံးပြုခြင်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းရေးဆွဲထားသော မူဝါဒဖော်ပြချက်များအား ကျင့်သုံးနိုင်ရန်အတွက် ထိန်းချုပ်ခြင်းများနှင့် ဖြစ်လာနိုင်ချေအန္တရာယ်များကို ထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက် စီမံခြင်း။
ခ။ R2O သည်ထိုကဲ့သို့သောမူဝါဒများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများ၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုကို စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး လိုအပ်ပါကပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ထိုကဲ့သို့သောမူဝါဒများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်ပါသည်.
၁။ Customerအား သင့်တော်‌ေကြာင်း စီစစ်လေ့လာခြင်းများ၊ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့်
စီစစ်လေ့လာခြင်းများ ၊ အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စများအတွက် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ တာဝန်ဝတ္တရားများအား သတင်းပေးပို့ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းများ။
၂။ ၀န်ထမ်းများအား Customer အား ပိုမိုနားလည်သိရှိနိုင်ရန်၊ ငွေကြေးခဝါချမှုကိုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများ ၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းမှတိုက်ဖျက်ခြင်းဆိုင်ရာတာဝန်များနှင့် အခန်း (၇) တွင် ဖော်ပြထားသည့် သတင်းပေးပို့ရန် လိုအပ်သည့် အပေးအယူကိစ္စရပ်များကို ပိုမိုနားလည်သိရှိစေရန်အတွက် အဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးအစီအစဉ်များ
၃။ ဤဥပဒေကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို လိုက်နာမှုရှိခြင်းနှင့် ထိရောက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းထားသော လုပ်ငန်းတွင်းစစ်ဆေးခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်များ။
၄။ R2Oသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းအန္တရာယ်များ၊ လက်ရှိ သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်မှုအသစ်များ (သို့ မဟုတ်) နည်းပညာများ၊ ပို့ဆောင်ရန်လမ်းကြောင်းများအပါအဝင်ဖြစ်သည့် နည်းလမ်းများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအန္တရာယ်များကို လျှော့ချခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက်ပြုလုပ်ခြင်း။
၅။ ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းအသစ်များအသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အလေ့အထများကို အသုံးပြုရန်အတွက် ဖြစ်လာနိုင်သည့်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းများကို ကြိုတင် ပြုလုပ်သင့်သည်။
၆။ ထုတ်ကုန်အသစ်များ၊ ၀န်ဆောင်မှုများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ နည်းပညာများနှင့် ဆက်စပ်၍ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သောငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းအန္တရာယ်များကို R2Oမှ အကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအန္တရာယ်များကို လျှော့ချရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် သင့်လျှော်သော အစီအမံများ ပြုလုပ်ရမည်။
ရ။ ထိုအရောင်းဝယ်ကိစ္စရပ်များသည် Customer ၏ အသိဉာဏ်ဗဟုသုတ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်မှုများနှင့် စွန့်စားလုပ်ဆောင်ရမည့်‌ ကောက်နှုတ်ချက်များတို့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပြီး လိုအပ်ပါက ဝင်ငွေရလမ်းကိုလည်း စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်သည်။
၈။ R2Oသည် Customerများအား စီးပွားရေးဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုတစ်ခုချင်းစီအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ် စီစစ်လေ့လာခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။
ဂ။ ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများသည် ဤမူဝါဒတွင်ပါရှိသည့် လိုအပ်ချက်တစ်ခုချင်းစီအရ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် တွက်ချက်ဆုံးဖြတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ တွက်ချက်ဆုံးဖြတ်မှုများတွင် စီးပွားရေး ဆောင်ရွက်မှုများ၏ပမာဏ၊ ဒေသ၊ Customerများ ၊ အရောင်းအဝယ်များ၊ ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်‌ဆောင်မှုများ၊ ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများနှင့် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးပထဝီအနေအထားနှင့် အတိုင်းအတာများ အစရှိသည်တို့သည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းအန္တရာယ်များနှင့်အတူ ပါဝင်ပါသည်။
ဃ။ R2O မှ အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်
က။ ဤမူဝါဒထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်းများအရ ရုံးခွဲများ၊ လုပ်ငန်းခွဲများအပါအဝင် လုပ်ငန်းတခုလုံးအပေါ်၌ အသုံးပြုဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ခ။ Customerများအား စီစစ် လေ့လာသည့်နည်းလမ်းများ၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းအန္တရာယ်များနှင့် သတင်းအချက်အလက်အသုံးပြုမှုကိုကာကွယ်ရန် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပါအဝင် စသည်တို့ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် သတင်းအချက်လက် မျှဝေခြင်းဆိုင်ရာ နည်းလမ်းများရှိခြင်း။
င။ R2O မှ အောက်ပါတို့ကိုလေ့လာစောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်သည်။
က။ ‌ရှုပ်ထွေးသော၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော၊ ကြီးမားသောငွေကြေးလွဲပြောင်းမှု သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ချက်မရှိသော စီးပွားရေးဆောင်ရွက်မှု (သို့ ) ဥပဒေအရဆောင်ရွက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များ မရှိမှု အစရှိသည့် ပုံမှန်မဟုတ်သော လက္ခဏာရှိသည့် အရောင်းအဝယ်ဆောင်ရွက်မှုများ။
ခ။ ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း အန္တရာယ်များကို တားဆီးရန်အတွက် လုံလောက်သောအစီအမံများ မပြုလုပ်ထားသည့်နိုင်ငံများနှင့် စီးပွားရေးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းများ။
စ။ R2O သည်အထက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့် ဆက်စပ်သည့်အရောင်းအဝယ်၏ နောက်ခံနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ (သို့မဟုတ်)
စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုများကို ဖြစ်နိုင်သမျှအကဲဖြတ်ရမည်ဖြစ်ပြီး တွေ့ရှိချက်များကို စာဖြင့်ရေးသား မှတ်တမ်းတင်
၆။ ကြားခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ အမှီပြုမှု
R2O သည် customer အား လေ့လာစီစစ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါတို့ကြိ ပြုလုပ်ပေးနိုင်မည့် အခြားကြားခံအဖွဲ့အစည်းများကို အမှီပြုနိုင်ပါသည်။
က။ သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ ရယူခြင်း။
ခ။ Customerအား စီစစ်လေ့လာခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် အခြားစာရွက်စာတမ်းများကို
တောင်းဆိုလာပါက နှောင့်နှေးမှုမရှိဘဲ ပေးအပ်နိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်း။
ဂ။ လိုအပ်ချက်များအား ထိန်းသိမ်းခြင်း ကြီးကျပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကို
သို့ရာတွင် Customerအား ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်းသည် R2O ၏ အဓိကတာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
၇။ တားမြစ်ထားသည့်အမည်မသိပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အကော့င်များ
R2Oမှ အမည်မသိပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အကောင့်များ သို့မဟုတ် နာမည်တုများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့်အကောင့်များကို အသုံးပြုခြင်းမှ တားဆီးပိတ်ပင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
က။ R2O သည်အောက်ပါအချက်အလက်များ၏ မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းပြီး ၎င်းထိန်းသိမ်းထားသော မှတ်တမ်းများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များမှာ စီမံအုပ်ချုပ်သူများနှင့် အခြားအာဏာပိုင်အဖွဲ့စည်းများမှ အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ထားရှိထားမည်ဖြစ်ပြီး အခြားအရောင်းအဝယ်များ သီးခြားစီ ပြန်လည်ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်စွာ ထိန်းသိမ်းထားရှိရမည်ဖြစ်သည်။
၁။ Customeအား စီစစ်လေ့လာခြင်းနည်းလမ်းများမှ ရရှိလာသော စာရွက်စာတမ်းများ၊ မှတ်တမ်းများ နှင့် Customer
သို့မဟုတ် အခြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ၏ အ‌ကောင့်များနှင့် အနည်းဆုံး ၅နှစ်သက်တမ်းကာလရှိသည့်
စီးပွားရေးဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ နှင့် အခြားစီးပွားရေးင်ရ,စာရွက်စာတမ်းများ။
၂။ ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပနှစ်မျိုးလုံးတွင် ၅နှစ်အတွင်းပြုလုပ်ခဲ့သည့် ငွေပေးချေမှု သို့မဟုတ် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှတ်တမ်းများ။
၃။ ဥပဒေအရပေးသွင်းရသော ငွေပေးငွေယူဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ၅နှစ်အတွင်း စီမံအုပ်ချုပ်သူများသို့ တင်ပြထားသည့် အခြားသက်ဆိုင်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ။
၄။ အသုံးပြုပြီး သို့မဟုတ် ၅နှစ်သတ်တမ်းကျော်ကာလ၌ ပြင်ဆင်ထားသည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အခြားနောက်ဆက်တွဲသတင်းအချက်လက်များ
ခ။ R2O သည် ဤအပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည့် ကောက်ယူထားသည့် စာရွက်စာတမ်းများ၊ အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းများ၊ အန္တရာယ်ရှိသော Customerများ နှင့် အခြားစီးပွားရေးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများနှင့်စပ်လျင်းသည့် စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
က။ R2O ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် ငွေကြေး သို့မဟုတ် ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု အရောင်းအဝယ်ပမာဏသည် သတ်မှတ်ထားသောပမာဏ သို့မဟုတ် ထိုသတ်မှတ်ထားသောပမာဏထက်ကျော်လွန်နေပါက သို့မဟုတ် ၎င်းပိုင်ဆိုင်မှုများသည် တရားမဝင်နည်းလမ်းများဖြင့် ရရှိခြင်း သို့မဟုတ် ငွေကြေးခဝါချခြင်း သို့မဟုတ် အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့်ရရှိလာသည်ဟု ယုံကြည်ရန် သင့်လျော်သောအကြောင်းပြချက်ရှိပါက ၎င်း၏စီမံခန်ခွဲသူများထံသို့ချက်ချင်းသတင်းပို့ရမည်။
ခ။ R2O ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်အခြား ၀ န်ထမ်းများ၊ ပြင်ပဥပဒေအကြံပေး သို့မဟုတ် အခြားအာဏာပိုင်အဖွဲ့စည်းများမှ လွဲ၍ အခြားမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုမဆို ထိုသတင်းအချက်အလက်များနှင့် မှတ်တမ်းများအား ပေးပို့ဖော်ပြခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။
ဂ။ ငွေသားလွှဲပြောင်းမှုတခု သို့မဟုတ် ငွေသားလွဲပြောင်းမှုများသည် USD ၁၅၀၀၀ နှင့်ညီမျှသော သို့မဟုတ် ကျော်လွန်နေပါက စီမံအုပ်ချုပ်သူများထံသို့ အကြောင်းကြားသတင်းပေးပို့ရမည်။
ဃ။ R2O ၀ န်ထမ်းများသည်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် ပြဌာန်းထားသောဥပဒေများအရ ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့်အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ ထိုအန္တရာယ်ကဲဖြတ်ခြင်းများ၊ အခြားသက်သေအထောက်ထားများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို စာဖြင့် ရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များမှ အလွယ်တကူ အသုံးပြုရယူနိုင်ရန်အတွက် မှန်ကန်စွာ မှတ်တမ်းတင်သိမ်းဆည်းထားရမည်ဖြစ်သည်။
၁၀။ ဝန်ထမ်းများအတွက် AML/CTF ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသော အစီအစဉ်များ
က။ R2O ၏ AML / CTF အစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ၀န်ထမ်းအားလုံးသည် AML / CTF မူဝါဒကြေငြာချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အပြည့်အ၀ သတိပြုမိရန်လိုအပ်ပါသည်>
ခ။ ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် ဤမူဝါဒကြေငြာချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖတ်ရှုလိုက်နာရန်လိုအပ်ပြီး Compliance Officer အား စိုးရိမ်ရသည့်အခြေအနေများကိုအကြောင်းကြားသွားရမည်ဖြစ်သည်။
ဂ။ R2O ၏ AML / CTF မူဝါဒကြေငြာချက်နှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ဆက်လက်လိုက်နာမှုရှိစေရန် ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် Compliance Officer မှ လိုအပ်သည့်အတိုင်း နှစ်စဉ် သို့မဟုတ် မကြာခဏဆိုသလို အသိအမှတ်ပြု ပုံစံစာရွက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအားဖြင့် ဤမူဝါဒပါအကြောင်းရာများအား လိုက်နာသိရှိကြောင်း အတည်ပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။
ဃ။ ၀န်ထမ်းများမှလည်း အောက်ပါတို့ကို ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
က။ Compliance Officer မှသတ်မှတ်ထားသော အချိန်တွင် ပြုလုပ်ပေးသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒ
ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ပတ်သက်သော သင်တန်းအစီအစဉ်များကို တက်ရောက်ခြင်း။
ခ။ ငွေကြေးခဝါချခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းများကို မည်သို့ခွဲခြားသိမြင်ရမည်နှင့် မည်သို့
ဂ။ Compliance Officer ထံသို့ အချိန်မှီ နှင့် လျှင်မြန်စွာသတင်းပေးပို့ခြင်းများပြုလုပ်ရန်။
ဃ။ ဝန်ထမ်းများကိုယ်တိုင် AML / CTF ဥပဒေများ စည်းမျဉ်းများနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေရန်။
င။ R2O ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးမူဝါဒထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်များ ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလုံး၏ လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။
စ။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် အခြားဥပဒေအရ
ဆောင်ရွက်ချက်များ အစရှိသည့်ကိစ္စရပ်များအား ကာကွယ်ခြင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် Compliance Officer ထံသို့
ဆ။ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးသင်တန်းများသို့ တက်ရောက်ရန်ဖြစ်ပြီး ထိုကဲ့သို့တက်ရောက်ခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် R2O ၏ မူ၀ါဒ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များအရ ၎င်းတို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုသိရှိလာရန်။
င။ R2O သည် စီမံခန့်ခွဲသူများမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း အတိအကျလိုက်နာရမည်။